မမသီရိ: C-box ထဲမှ စကားများ (မေ ၂၀၀၉)
ကျမရဲ့ဘလော့လေးက တကယ်တော့ လူသိပ်မစည်လှပါဘူး။ အချိန်အခက်အခဲရယ် တခြား အခက်အခဲလေးတွေတချို့ရယ်ကြောင့် သူများဘလော့တွေရဲ့ စီဘောက်ထဲမှာ ချစ်ခင်ဖွယ်ရာ တီတီတာတာ စကားတွေ ချန်မထားဖြစ်သလို.. ကိုယ့်ဆီလာပြီး နှုတ်ဆက်သူတွေ ကိုလဲ တဦးချင်းပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ အခက်အခဲလေး တွေရှိပါတယ်။
အပြင်မှာဆို စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ အောင်ပြောတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ စီဘောက်ခ်ထဲ မှာ ပြောဖို့ကျတော့ နဲနဲလေး မရဲတာလဲ ပါ ပါတယ်။ တောကျတယ်ပဲ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့နော် ..း)..။ တောသူမို့လို့ တောကျတာမဆန်းပေမဲ့ ..နေ့စဉ်လိုလာရောက်နှုတ်ဆက်သူတွေကို အားနားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ တချို့မိတ်ဆွေတွေ လာပြောတဲ့စကားလေးတွေက ခင်မင်မှုတွေနဲ့ နွေးထွေးနေတာမို့ ကျမတကယ်မြတ်နိုး နှစ်သက်မိ- တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။ တချို့ မိတ်ဆွေတွေကလဲ ဘယ်စာလေးတော့ဖတ်သွားပြီ မမသီရိရေလို့ သက်ဆိုင်ရာ ပို့စ်မှာ comment ချန်မထားပေးမဲ့ c-box ထဲမှာပဲ ပြောသွားတတ်ကြတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ လာလည်တယ်နော် လို့ ပြောပြီး ခြေရာလေးတွေချန်ခဲ့တတ်ကြတယ်...။ မိတ်ဆွေတွေအပေါ် တာဝန်မကျေနိုင် လွန်းသူမို့ ကိုယ့်ကိုခင်မင်လို့ လာလည်ကြသူတွေ၊ နှုတ်ဆက်စကား လာပြောကြသူတွေ အတွက် တခုခု ပြန်လုပ်ပေးချင်နေမိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ c-box ရဲ့ သဘာဝ ကို လေ့လာကြည့်မိတော့ သူက Message အရေအတွက် ၁၀၀ ကိုပဲ သိမ်းထားနိုင်တာကို တွေ့ရ ပြန်ပါတယ်။ ကျမ ဘလော့လေး စဖွင့်စက ရှိနေခဲ့တဲ့ စကားတွေဆိုပျောက်သွားတာကြာခဲ့ပြီလေ။ ဒီလိုနဲ့ မတ်လရဲ့ တနေ့မှာ တော့ ကျမစိတ်ကူလေးတခုရတာနဲ့အဲဒီစိတ်ကးလေးကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ c-box ထဲက အမှတ်တရစကားတွေကို အမှတ်တရ သိမ်းထားဖို့ပါ။ ပြီးတော့ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ အလွမ်းပြေ ပြန်ဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့။
ကဲ.. ကျမ ချစ်တဲ့ ကျမကို ချစ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ c-box ထဲက စကားလေးတွေ ဒီနေရာမှာ အမှတ်တရ သိမ်းထားလိုက်ပါပြီနော်..။ နေ့စဉ် ပြန်လည်နှုတ်မဆက် နိုင်တဲ့ အတွက် စိတ်မရှိကြပါနဲ့။ တီတီ တာတာတွေ မပြော တတ်ပေမဲ့ ..တကယ် ခင်မင် တတ်ပါတယ်..း)။ လာလည်သူတွေအားလုံးကိုလဲ လေးစား ချစ်ခင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒီမှာ ထပ်ပြောပါရစေနော်။ လစဉ် လကုန်ပြီးတဲ့ အခါတိုင်း ဒီပို့စ်လေး တခုကို မပျက် မကွက် တင်ပေးသွားပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက စကားတွေကို တော့ မေလဆန်း နေ့စွဲ နဲ့ publish လုပ်တာမို့ အဲဒီမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်..။
အာလုံးပဲ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ တဲ့ ဘ၀ ခရီးကို နေ့စဉ် ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ..။
31 May 09, 06:29
Son:: I came and read some old poems over and over....!!!
31 May 09, 03:33
blackdream: အစ်မရေ မအားဘူးလားဗျို့..။ အဆက်ကိုမျှော်ရတာ မောလှပြီ..
30 May 09, 16:32
နှင်းနဲ့မာယာ: မမရေ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတုန်းပဲလား ပျောက်နေလို့ လာရှာတာ။
30 May 09, 16:10
JulyDream: အဲဒီကနေ မတက်လာတော့ဘူး။ လျှောက်လဲချက် မြန်မြန်ပေးလေ။
30 May 09, 11:29
ကို: ရောက်ခဲ့တယ်၊ ဖတ်သွားတယ်
30 May 09, 03:37
Son:: I am here , reading some poems again.........
29 May 09, 14:06
မောင်ငယ်: စာတွေ လာဖတ်သွားပါတယ် ။
28 May 09, 23:54
ဂင်ကြီး: လာလည်ပါတယ် ငါ့ညီမရေ
28 May 09, 08:23
ပြည့်စုံ: မမသီရိရေ... ပျောက်နေသလိုပဲ... ကျနော်ပျောက်တာဖြစ်မယ်နော်...။
27 May 09, 07:17
Son:: I was here for an hour , reading some posts and poems again!!!!!!wishing you to havealong life!!!!!!!!!
26 May 09, 01:48
ဂင်ကြီး: လာလည်ပါတယ်ညီမရေ ခရီးကပြန်လာမှပျောက်နေသလိုပဲ
26 May 09, 00:40
24 May 09, 08:02
mayyati: ထိုင်း- မြန်မာ နယ်စပ်ချစ်ကြည်ရေးတံတားတွင် ဆန္ဒပြ
22 May 09, 11:50
သမီးပျို: သူလေးဘာလုပ်နေပါလိမ့် နေကန်းလားအမ
22 May 09, 07:52
minneain: လာရောက်ကြောင်းပါ အစ်မသိရီရေ
21 May 09, 08:12
နှင်းနဲ့မာယာ: မမရေ လာတယ်နော်။
21 May 09, 04:59
21 May 09, 04:37
စိတ်စမ်းရေ: လာနှုတ်ဆက်ပါတယ် အစ်မတော်...
21 May 09, 03:55
ThihaThit: မမသီရိရေ.. စာလာဖတ်တယ်..
20 May 09, 19:36
ဂင်ကြီး: လာလည်ပါတယ် ညီမငယ်ရေ့
20 May 09, 17:48
မိုးခါး: မမသီရိရေ .. အပိုင်း ၁ ၂ ၃ ပရင့်လာထုတ်ပါတယ် ..း)
20 May 09, 11:07
သားထူး: ဒီနေ့ရတဲ့ အန်တီပုံလေးတွေ တင်ထားပေးပါတယ်ဗျို့
20 May 09, 10:18
blackdream: အလည်သက်သက်ပဲ အစ်မရေ..။ သတိရလို့ လာကြည့်တာပါ..။
စာတွေတော့ ဖတ်မသွားသေးဘူး..။ အလုံးနဲ့အရင်းနဲ့ လာဖတ်မယ်
kaungkinpyar: မမ စာလာဖတ်တယ် ၇ှင့်
20 May 09, 08:32
20 May 09, 08:30
20 May 09, 06:53
19 May 09, 20:43
reenoemann: ရောက်လို့ လာပါတယ် မမ ရေ
18 May 09, 20:34
reenoemann: ထမင်းစားချိန် ခဏလာလည်ပါတယ်နော်
18 May 09, 06:21
18 May 09, 03:28
ဥပသကာ: စာဖတ်ရောက်တယ် ၊ဒလို ရှား ပါးတွေ က
ို ပြန်တင် ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး ပါ ဗျာ
17 May 09, 23:55
ကြယ်စင်က: မန်း နှစ် ၁၅၀ပြည့်ပွဲတော် ပုံရိပ်တစ်ချို့ လာရှုဖို့ ဖိတ်ပါတယ်
17 May 09, 19:43
ဝေါသားလေး: လမိုက်ညတွေ များခဲ့ပေါ့ မမသီရိရေ.....
17 May 09, 11:29
နေမင်းသံစဉ်: အလည်ရောက်ပါတယ် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
17 May 09, 08:18
သားထူး: ရောက်တယ်ဗျို့ ဖီဒယ်အကြောင်းကိုဖတ်ပြီး မန့်သွားပါတယ်
17 May 09, 06:30
နေညိုရင့် : ဖတ်..မန့် ...လစ်သွားပြီဗျို့ ..
17 May 09, 05:00
kaungkinpyar: ညီမလေးလဲ အပိုင်း ၂ လာဖတ်တယ် မမ
17 May 09, 04:38
လူလ: မင်္ဂလာပါ မမသီရီ၊ အပိုင်း ၂ကို ဖတ်ပြီးပြီ၊ ကျေးဇူး၊
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေကြောင်း၊ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
17 May 09, 04:27
မမသီရိ: ဘာပဲပြောပြော ခုလို လာပြောပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ
မမသီရိ: ပြီးတော့.. ခုဆို လူအများ ပိုသိ တဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေတယ်လေ
17 May 09, 04:26
မမသီရိ: တကယ်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတာပါ.. အမ က ကျမလေးစားရသူ တဦးပါ
မမသီရိ: အမမေငြိမ်း .. အမ ပြောချင်တာကို နားလည်ပါပြီ..
ဂျူလိုင်နဲ့ လဲ အများကြီး ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်.. ကျမ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာ..
အောက်တန်းစား တိုင်းပြည် ဆိုတဲ့ အသုံးအောက် မှာ ရှက်တယ်ဆိုတာ တွဲ ဖတ်ရတော့..
17 May 09, 04:15
မေငြိမ်း: ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ပစ်သတ်တယ်..
အများစုက အဖိနှိပ်ခံတယ်ဆိုတာလေ.. အဲလို အသတ်မှတ်ခံရတဲ့ သမိုင်းကိူ ရှက်တာပါ..
မေငြိမ်း: မမသီရိရေ.. မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ပြောရမှာကို ရှက်တာမဟုတ်ဘူးလေ..
ဟိုအုပ်စုကြောင့် မြန်မာတွေ.. လို့ အထင်ခံရတာကို ရှက်တာ..။
မသီရိလည်း ကြုံဖူးမယ်ထင်တယ်.. အိုးး မြန်မာလား.. ဘုန်းကြီးသတ်တယ်..
16 May 09, 15:28
ပြည့်စုံ: မမသီရိရေ... ပျောက်နေလို့.... အခုမှ ပြန်တွေ့တယ်နော်....
16 May 09, 06:54
မိုးစက်အိမ်: လာလည်ပြီး ကဗျာတွေ ဖတ်ခဲ.တယ်အမ ရေ
16 May 09, 04:32
16 May 09, 03:27
လူလ: မင်္ဂလာပါ မမသီရီ၊ ကက်စထရိုအကြောင်း ဖတ်သွား၏။
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေသည်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
15 May 09, 22:20
15 May 09, 10:53
သားထူး: မသီရီရေ..ပြန်ပြင်လိုက်ပြီဗျို့ ( အဆင်ပြေစွာနဲ့ပေါ့ )
15 May 09, 10:44
သားထူး: အန်တီ အကြောင်းလေးတွေတင်ထားပါတယ်ဗျာ့ လာပြီး ဝေဖန်ပေးပါအုံး
15 May 09, 10:43
သားထူး: မသီရီရေ..ရောက်တယ်ဗျာ အမှားတွေရှိလည်းပြောပြပေါ့
ဒါပေမယ့် ပြင်နေရတာ အဆင်မပြေတော့ပြင်တော့ဘူးနော့
15 May 09, 07:00
burmaborn: လာရောက်သွားပါတယ်။ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ...
14 May 09, 23:42
ရွှေညာသား: ရောက်ကြောင်း ကောက်ကြောင်းကထပ်
14 May 09, 20:41
14 May 09, 19:58
ကြယ်စင်က: မန်း နှစ် ၁၅၀ပြည့်ပုံရိပ်တွေလာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်
14 May 09, 16:55
14 May 09, 16:39
14 May 09, 09:51
သားထူး: ကဗျာလေးတွေက ကြည်နှုးစရာလေးတွေပဲနော
့ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ခဏ အသက်ကြီးတာကိုမေ့ပြီး ငယ်မူပြန်သွားတယ် ဟိ ဟိ ဟိ
14 May 09, 07:13
မောင်ငယ်: ကဗျာလာရွတ်တာပါ အစ်မ ။
လင်းဒီပ: အစ်မရေ..သတ်ပုံလာပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်
14 May 09, 05:04
14 May 09, 02:59
kaungkinpyar: ချစ်မမ ရောက်တယ်
13 May 09, 21:16
နေညိုရင့် : ကဗျာလာဖတ်သွားပြီ အမရေ
13 May 09, 20:31
reenoemann: လာနမ်းသွားတယ် အမရေ ကဗျာကို
13 May 09, 18:59
ကိုဂစ်တာ: လာလည်ပါတယ် မမသီရိ
13 May 09, 18:45
တလနွန်: လည်လည်လာပါတယ် အမ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ
သားထူး: ဟုတ်ကဲ့မသီရီရေ..လင့်လိုက်ပါမယ်နော့ ပျော်ရွှင်ပါစေ
12 May 09, 21:37
12 May 09, 10:27
သမီးပျို: မမရေ ကဗျာလာဖတ်တာ ဂွတ်တယ်ဗျို့
12 May 09, 09:07
12 May 09, 04:12
ဂျပန်ကောင်လေး: မမသီရိရေ.. လာလည်ပါတယ်ဗျ.. နေကောင်းလား...
11 May 09, 20:55
reenoemann: အမရေ သရဲ ခြောက်ခဲ့တယ်နော်။
11 May 09, 18:00
မိုးခါး: မမသီရိရေ .. မင်္ဂလာနံနက်ခင်း
11 May 09, 17:18
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမတော့ အလွမ်းတွေပါလားသလားဟေ့...။
11 May 09, 08:01
11 May 09, 07:50
kaungkinpyar: ချစ်မမသီရိ ဆီလာလည်ပါတယ်
11 May 09, 06:46
နှင်း: မမရေ လာတယ်နော်....
11 May 09, 05:09
လူလ: မင်္ဂလာပါ မမသီရီရေ.. လာလည်သွားတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
11 May 09, 04:50
နေညိုရင့် : ကဗျာလာဖတ်သွားပါတယ်..အမရေ
11 May 09, 04:05
reenoemann: အမ ပြန်ရောက်တာကြာနေပြီနော်
သတိလည်ထားအုံး နောက်တပတ်မှာတွေ့ဖို့ရိသေးတယ်ဗျ အားရင်လာခဲ့နော်
11 May 09, 03:04
ကလေးလေး: တီတီရေ.. လာလည်ပါတယ်
10 May 09, 22:23
10 May 09, 16:37
9 May 09, 08:46
ချိုသင်း: မမ ဦးကျောက်တောင်နဲ့ စပ်တူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။
သူငယ်ချင်းနဲ့လုပ်တာ။ သူ့ဆီမှာ တည်းတာပါ။ သူက အဖေ့ မိတ်ဆွေလေ။
9 May 09, 04:56
8 May 09, 22:43
reenoemann: အမ ရေ ပြင်သွားပြီးဗျ ကျေးဇူးနောက်လည်း ပြင်ပေးအုံးနော်
8 May 09, 16:55
မိုးခါး: မမရေ .. အလည်လာပါတယ် ..း)
8 May 09, 15:01
နှင်း: မမ ပြန်ရောက်ပီလား။
8 May 09, 10:15
နေညိုရင့် : စာလာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
8 May 09, 06:59
8 May 09, 05:15
kaungkinpyar: နားပါဦး ချစ်မမ ရေ
8 May 09, 05:00
reenoemann: အမ ရေ လာလည်သွားတယ်နော်။
ပါလာတာလေးတွေ ထုတ်ကျွေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့အုံးနော်
8 May 09, 04:55
8 May 09, 04:39
သမီးပျို: မမသီရိပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ လာနှုတ်ဆက်တာပါ
ခုနားလိုက်ဦးနော် ပြီးမှမုန့်ကြွေးရပါတယ် အေးဆေးပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
8 May 09, 04:29
ဂင်ကြီး: ညီမရေ့ ပြန်ရောက်လာပီလားဟေ့ အပြေးလာနှုပ်ဆက်တာနော
် အစစအဆင်ပြေပါစေဗျား အနားဟူလိုက်ပါအုံးနော ခရီးကပြန်လာတာဆိုတော့လေ။
7 May 09, 19:26
ချိုသင်း: မမ.. ချိုသင်းတို့တွေကို မေ့သွားပြီ။ သူ့ချစ်ချစ်နဲ့တွေ့နေလို့..
4 May 09, 21:34
4 May 09, 21:33
အတွက်အထူးသတင်း..... မှုဆလိင်ခွေးသူခိုး အိုဆာမာဖင်ခံ ကိုမိပြီ၊
4 May 09, 21:32
4 May 09, 21:31
theint2ei(UK): ဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓ၇ိပ်မှာမွှေးလို.၈ နှစ်အ၇ွှယ်မှာနင်အဆော်မခံ၇တာ
4 May 09, 20:12
ပြည့်စုံ: ကျနော်လည်း ဘယ်သူ့ကို လွမ်းရမှန်းကို မသိတော့ဘူးဗျာ..
4 May 09, 07:48
kaungkinpyar: မမ မမ မမေ၇
4 May 09, 01:05
3 May 09, 06:39
george: blogတွေမှာ ကိုယ့်လူမျိုး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ပက်သက်ရင်
ခပ်နောက်နောက်စကားတွေသုံးတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ မိဘများ ကြည့်ထိန်းပေးစေလိုပါတယ်။
3 May 09, 01:58
ဂင်ကြီး: ငါ့ညီမ ပြန်မလာသေးဘူးလားဟ လာလည်တိုင်းမတွေ့မိလို့လေ။
3 May 09, 01:05
မင်းလွမ်းနောင်: မမရေ အလည်ရောက်တယ်
2 May 09, 19:34
မေ့သမီး: မမ ခရီးထွက်နေတုန်းပဲလားဟင်။
2 May 09, 03:39
1 May 09, 21:27
Posted by မမသီရိ at 6/09/2009 07:29:00 PM
Labels: c-box ထဲမှ စကားများ
အကြံကောင်းလေးပါပဲ အစ်မရေ .. တကယ်ကို ကောင်းပါတယ် .. ဘာပဲပြောပြော ဘဝတစ်ခုရဲ့ အမှတ်တရပေါ့
Tuesday, June 09, 2009 8:51:00 PM
Idea ကတော့ ရှယ်ပဲ အစ်မရေ...။ စ၀င်ကတည်းကကို ထိပ်ဆုံးက နာမည်ကြီးကမဲနေတာပဲ :P
Tuesday, June 09, 2009 11:21:00 PM
ရေစက်က အခုမှ စတယ်ပြောရမယ်..
Thursday, June 11, 2009 3:32:00 AM